Egypt: Nilo osimiri, ihu igwe na ndị bi na | Akụkọ Njem
Egypt: osimiri Naịl, ihu igwe na ndị bi na ya
Ikwu banyere Ijipt bu ikwu okwu Nile ndagwurugwu. A mụrụ osimiri a na mpaghara plateau nke Great African Lakes, na-eme njem karịrị kilomita 6000 tupu ịwụsa mmiri ya n'Oké Osimiri Mediterenian. E kewara ọdọ mmiri ya ụzọ abụọ: otu mejupụtara ụzọ elu na etiti nke osimiri ahụ, nke ọzọ mejupụtara ala mmiri Osimiri Naịl. , na-agafe na bọket mepere n’ebe ugwu. Ya ihu igwe A na-ahụkarị ya na West na Sahara Africa, ebe ọ nwere ọzara, steppe na savanna. Ala nke osimiri ahụ ma ọ bụ nke a makwaara dị ka akụkụ ugwu, kwekọrọ na Egypt.
Ke Egypt, osimiri mgbe ọ gafere ndị 6 Osimiri Naịl ọkara ma jiri onyinye nke mmiri nke Etiopia mee ka ọ bawanye ụba, ọ na-eweta warara nke 2 ruo 25 kilomita n'obosara nke bụ oasis na nke gbatịrị na Delta. Na waterfalls anyị nwere ike ịchọta ha elu: nke mbụ dị na Aswan na nke abụọ na Wadi Haifa. Mgbe osimiri ahụ na njem ya site na Egypt, a na-enyochakarị osimiri ahụ.
Osimiri Naịl na-ekewa mba ahụ gaa Upper, Middle na Lower Egypt. Nke mbụ sitere na ókè-ala na Nubia na latitude nke Hermopolis, ihe dika ebe Middle Egypt bidoro. N'ebe a, ogwe aka nke osimiri ahụ, n'ebe ọdịda anyanwụ, ga-asọba n'Ọdọ Mmiri Moeris, nke dị na ala nke nkụda mmụọ El Fayum, mita 400 n'okpuru oke osimiri. Osimiri a ebelatala mgbatị ya ruo n'ókè nke na obodo ochie nke Cocodrilópolis, nke dị n'ụsọ osimiri, taa dị ihe dị ka kilomita 20 site na ya. Lower Egypt kwekọrọ na Delta.
Na Egypt, Osimiri Naịl na-asọbiga ogologo, na-adị nwayọọ nwayọọ, ma a na-agbaji oge niile otu ugboro n'afọ mgbe ọ na-abawanye nke ukwuu n'ihi mmiri ozuzo nke na-ada na Etiopia massif n'oge oge ọkọchị. Mmiri ahụ na-ebu basaltic alluviums nke mejupụtara ụrọ fatịlaịza a ma ama na-acha ọbara ọbara, nke na-agbakwụnye uru nye ndị idei mmiri ahụ nyere. Nke a na-amalite na June, rute ya kachasị na Septemba ma dịgide ruo etiti October. Ọ bụ site n’ebe ahụ mgbe mmiri rutere ọzọ, rute n’obere ọkwa ha n’ọnwa Febụwarị na Machị. Ihe omuma a di nkpa ima mgbe ichota ubochi nke njem anyi n’Ijipt.
1 Ihu igwe na Egypt
2 Ndị bi na asụsụ ha
Ihu igwe na Egypt
Ihu igwe dị n'ọzara na mmiri ozuzo kwa afọ na-erughị 250 mm (na Cairo, naanị 30 mm). A akọrọ idụhe n'ụzọ dị ukwuu na-akọwa na nchekwa dị mma nke ihe ncheta oge ochie na ọbụna mummies.
Dị ka ọ na-ahụkarị ebe ndị a, a na-ahụkarị oscillation na-ekpo ọkụ site n'ụbọchị ruo n'abalị. Na winters dị nwayọọ na N'oge ọkọchị, na-ekpo ọkụ nke ukwuu, nke ifufe na-esite n'Oké Osimiri Mediterenian belata n'ụzọ dị ntakịrị n'ebe ugwu, na-adọrọ mmasị site na mpaghara ala dị ala nke ime ahụ na-ekpo ọkụ.
Ọzara ahụ nwere 97% nke ókèala Ijipt dị ugbu a. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị n'etiti mpaghara ọzara nke gbatịrị ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke Naịl. Nke mbụ bụ ịgbatịkwu ọzara Arabian, ugwu ma jiri elu gbagoro ruo 2000 m. N'ebe ọdịda anyanwụ, nnukwu Libya erg na-agbatị, na ala dị larịị, nwere ụfọdụ oases.
Ndị bi na asụsụ ha
Oge ochie Egyptology anọwo na-atụle ọnụ ọgụgụ ndị Ijipt dị ka ndị sitere n'Africa, ndị otu asụsụ asụsụ Camitian, ndị ndị bi na ya gbatịrị Somalia ruo Libya. Ọ ga-abụrịrị ịhapụ mpaghara dị iche iche ka ọzara mere ka ha biri na ndagwurugwu na-eme nri nke Osimiri Naịl (ebe ịkụ azụ na ịchụ nta dịkwa ọtụtụ).
A gaara agbakwunye ọnụ ọgụgụ oge ochie na oge, Semites si Asia site na Saịnaị, na ndị Nubia site na ndịda. Ọ bụ n'ihi nke a asụsụ ndị Egypt ka ekewet njikọ na otu Semitic ọdịda anyanwụ.
Ugbu a na ịmara ọnọdụ ala Egypt na ihu igwe ya n'ime afọ ahụ, ị ​​dịla njikere ịhọrọ ụbọchị kachasị mma maka njem gị. Echefula ileta pyramid ndị kacha ewu ewu na mba ahụ: Pyramid Ukwu nke Giza, ili ma ọ bụ cenotaphs nke ndị fero Cheops, Khafre na Menkaure, wdg. Ma gị onwe gị, ị nwere Egypt n’ ndepụta gị nke mba ị ga-aga?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Egypt » Egypt: osimiri Naịl, ihu igwe na ndị bi na ya
Burkina Faso, osisi na amaghi nke Africa
Ihe efu na Milan, njem dị ọnụ ala